Wholesale Factory ambongadiny misy boaty 100 manadio ny famafana bakteria ho an'ny alika sy saka Mpamatsy sy mpanamboatra | tsara kokoa
Anaran'ny vokatra: Fanadiovana ny mamafa ny biby momba ny biby
Model Model: QMSJ-323
Akora ilaina: Rano voadio, Cetylpyridinium Chloride, Glycerin, Polysorbate 20, G2TAM, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-1, Aloe Extract, Vitamin E, Chamomile
Habe: 7 '* 8'
Manisa isaky ny boaty: Isa 100
MOQ: Boaty 1000
Antsipirian'ny fonosana： Kapoaka / baoritra 12
OEM & ODM: Manaiky (Support fonosana namboarina)
Ity paompy alika miady amin'ny bakteria ity dia tsy vitan'ny mamafa ny biby, fa azo ampiasaina amin'ny tarehy tarehy, sofina, hoditra, akanjo, nify, sns. Misy fitrandrahana aloe vera hamerovero ny biby fiompinao. Ary ity dia alika tsy misy fofona namafa ny safo-biby.
Ny famafana bakteria dia azon'ny saka sy alika ampiasaina. Rehefa mandeha amin'ny alika manontolo ianao, dia voaloton'ny loto sy bakteria ny tongony. Amin'izao fotoana izao dia afaka manampy anao manadio haingana ny alika ity hamafa alika ity, mba tsy handotoany ny gorodonao sy ny sezanao rehefa mody izy. Rehefa tapitra ny androny tsy andehanan'ny saka dia afaka manadio azy koa ianao.
Rehefa nivoaka io fafana lena io dia tian'ny mpanjifa. Nahazo valiny tsara avy amin'ny fianakaviana maro izahay. Notaterin'izy ireo fa raiki-pitia tamin'ity vokatra ity izy ireo ary nilaza fa tsy afaka manao raha tsy misy ny mamafa an'io biby fiompy io amin'ny fiainany.
Ny famafana alika azo ovaina dia tena mety amin'ny fampiasana fianakaviana. Mora apetraka ny boaty fonosana ary tsy mora tohina. Ny lamba mamafa lena dia be habe (7 * 8 santimetatra), izay afaka mamafa ny loto amin'ny faritra midadasika ary mety ampiasaina. Mandritra izany fotoana izany dia manohana serivisy namboarina ihany koa izahay. Raha te hampiasa ny marikao manokana ianao dia manana soso-kevitra tsara kokoa momba ny habe sy ny volon'ny solo, aza misalasala mifandray aminay.
* Fahafaham-po sy fiantohana amin'ny kalitao 100%
Ny fahafaham-ponao no laharam-pahamehanay. Raha manana fanontaniana ianao, dia aza misalasala mifandray aminay, hanampy anao hamaha azy izahay ao anatin'ny 24 ora.
AZO ATAO AMIN'NY ZAZA
Teo aloha: Ny orinasa OEM manana fahaizana lehibe 750 dia manisa ny famafana vovon-dra miady amin'ny bakteria
Manaraka: Ataovy madiodio mora foana ny fanadiovana kiraro fotsy sy hoditra
mamafa voa alika voajanahary rehetra
mamafa alika fanoherana ny bakteria
antifungal namafa ho an'ny alika
mamafa bakteria ho an'ny alika
mamafa alika tsara indrindra ho an'ny paws
mamafa alika voajanahary
fafao ny fahadiovan'ny alika
Mahomby deodorizing biby tia namana madio cleanin ...
Ny fanadiovana ny biby fiompy dia mamafa ny fanadiovana ny biby ...
Ny voajanahary voajanahary azo antoka hypoallergenic azo isaina ...
Kalitao goavam-be fikarakarana biby fiompy ...